Mikaroha ny diplaomanay sy ny programa »University of Hodges
Tsy mahita izay tadiavinao? Andao hanampy. Tsindrio fotsiny ny iray amin'ireo bokotra etsy ambany ary aforeto mba hahitanao ny lisitry ny programa misy.
rehetra Accounting mpiara-miasa Aviation AWS Academy Bachelor Business Fahasalamana ara-tsaina Communications Teknolojian'ny informatika Informatika Criminal Justice Fanampiana nify Digital Design EMS Anglisy ho fiteny faharoa Grammar anglisy Fiteny anglisy Featured Finance Fiofanana ho an'ny mpanara-maso voalohany Ny mari-pahaizana diplaoma fahasalamana Karakara ara-pahasalamana Hodges Connect Hodges Direct Hodges Heroes Fanadihadiana iraisam-pirenena Ny zava-misy fotsiny Legal Studies Fiainana Mandrakizay Management Marketing Master Nursing Torolàlana an-tserasera Physical Therapy Assistant Fampianarana sy fiofanana matihanina Psychology teknolojia Mamindra am-pitiavana Mari-pahaizana licence
Dika fidiovana ho an'ny nify
Vaovao mividy trano? Ity atrikasa ity dia manana ny zavatra rehetra ilainao mba hanaovana safidy tsara rehefa manao ny iray amin'ireo fividianana tena manan-danja indrindra amin'ny fiainanao. Handeha anao izahay amin'ny alalàn'ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny fividianana trano ary ampahafantaro anao ny momba ireo fanontaniana lehibe tokony hapetrakao…
Famaritana ny atrikasa Direct Support Professional (DSP): Amin'ity programa fanamarinana ity dia hahazo fiofanana ianao hanomezana tolotra Direct Support ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina sy fampandrosoana (toy ny Autism, Down Syndrome ary maro hafa). Handray mari-pankasitrahana amin'ny fiofanana virtoaly sy mivantana miaraka amina matihanina voamarina ianao. Ianao dia ho…
Tongasoa eto amin'ny HU Direct, Diviziona Express ao amin'ny Hodges University Hodges University manolotra mari-pankasitrahana sy mari-pahaizana tarihin'ireo mpiasa izay takiana amin'ny faritra sy ny sisa. Anisan'ny faritra ny fahasalamana, teknolojia, orinasa, fitantanana ary famatsiam-bola. Afaka mianatra any an-tsekoly, amin'ny Internet ary amin'ny alalàn'ny Teknolojia Enhanced Class (TEC) ny mpianatra, izay mamela…
Ny Amazon Web Services (AWS) Academy Cloud Foundation dia ny dingana voalohany mankany amin'ny tontolon'ny computing cloud an'ny AWS.
Manomboha amin'ny mari-pahaizana momba ny bakalorea ao amin'ny Hodges University Certified undergraduate Certified avy amin'ny Hodges University dia natao hanomezana anao ireo taranja manokana ilaina amin'ny indostria hananganana ny fahaizanao nefa mandingana ny mari-pahaizana fototra ilaina amin'ny diplaoma mpiara-miasa na bakalorea. Ho fanampin'izany, ny antontan-taratasinay dia aterina 100% amin'ny Internet ary mamela anao…
Ivotoerana hianarana mandritra ny androm-piainana
Hodges Connect. Fampianarana sy fiofanana matihanina amin'ny tena fiainana miaraka amin'ny fahaiza-manao tena izy.
Mahazoa fiomanana amin'ny fiofanana momba ny fitantanana sy ny fahaiza-mitarika izay azo ampiharina amin'ny mpanara-maso laharana voalohany. Ataovy ny fifandraisana ifandraisan'ny fitantanana ny olona sy ny asan'ny fikambanana isan'andro. Ny fahaizanao manara-maso dia afaka manampy amin'ny fampivoarana ny fahombiazan'ny mpiasa, izay avy eo mitarika serivisy ho an'ny mpanjifa miavaka. Ity andalana voalohany ity…
Topimaso momba ny fandaharam-pianarana
Ianaro ny zava-misy momba ny mari-pahaizana sy ny mari-pahaizana
Taratasy fanamarinana bakalorea manokana.
Topimaso momba ny diplaoma
Tsy misy zava-misy momba ny programa momba ny diplaomanay.
Topimaso momba ny bakalorea
Ny zava-misy momba ny mpiasa an-tsekoly dia mitaky ny mari-pahaizana licence.
Topimaso amin'ny Master Degree
Tsy misy mpameno, ny fandaharam-pianarana Master Degree fotsiny avy amin'ny Hodges U.